~~~ ပိုက်ဆံချမ်းသာမှ ခရီးသွားနိုင်တာ မဟုတ်ပါ ~~~~ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ~~~ ပိုက်ဆံချမ်းသာမှ ခရီးသွားနိုင်တာ မဟုတ်ပါ ~~~~
Posted by Shar Thet Man on Oct 21, 2016 in Creative Writing, Think Different, Travel | 11 comments
လူတိုင်းက အမြဲ ပြောနေတာ ရှိတယ်။ အမြဲလွဲမှားနေတဲ့ ကိစ္စကတော့ နင့်အလုပ်က ခရီးသွားရတယ်နော်။ အားကျလုိုက်တာ။ နင်က ပိုက်ဆံရှိတော့ ခရီးသွားနိုင်မှာပေ့ါ ဆိုတာပါဘဲ။ တကယ်တော့ ကိုယ်ဟာ ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့မိဘဆီက မွေးဖွားလာတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်မှာ ခရီးကိုချစ်တယ်ဆုိုတာထက် ပိုတဲ့ စိတ်ခံစားချက်ရှိနေတာတစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီစိတ်ကြောင့်ပဲဒီခရီးတွေကိုသွားဖြစ်သွားတာပါ။ ခရီးသွားဖို့ ပိုက်ဆံဟာ မလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရီးသွားတာကို အရမ်းခုန်မင်တဲ့ သူတွေကတော့ ပိုက်ဆံချမ်းသာခြင်း ရှိခြင်းဆိုတာထက် ပြင်းပြတဲ့ စိတ်။ ကြိုတင်ပလန်နိုင်ခြင်း (ဈေးသက်သာတယ်လေ) မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းတွေက သူတို့ ခရီးစဉ်တွေကို အလှပဆုံးဖြစ်စေတဲ့ အဓိက အရာတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောရရင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒရှိရင် ဘာမဆိုဖြစ်ပါတယ်။ အခုလဲ နှစ်လတိတိ ကြိုပလန်ထားတဲ့ ခရီးစဉ်ကို လုပ်နေတယ်။မရောက်ရောက်အောင်သွားမည်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက် ကိုယ့်မှာ အပြည့်ရှိတယ်….လိုက်ချင်တဲ့သူလိုက်ခဲ့လို့ရတယ်..အကုန်သူကိုခေါ်ပါတယ်…
လက်ထဲမှာ ဆယ့်လေးငါးကျပ်ပဲ ရှိတယ်။
ပိုက်ဆံစုပြီးလိုက်လို့ရတာပဲ..စုပေါ့…..ခရီးထွက်ချင်ရင်….. ဘာမှမ၀ယ်နဲ့ …..ဟိုကျမှဝယ်ဖို့ ခုတည်းကစုပေါ့… ခရီးထွက်ချင်စိတ်ရှိရင်ပြောပါတယ်.. မွန်လေးဆိုရန်ကုန်မှာဘာမှသိပ်ဝယ်လေ့မရှိဘူး…..နိုင်ငံခြားရောက်မှဝယ်တာ….
ပိုက်ဆံချမ်းသာမှ ခရီးသွားနိုင်တာ မဟုတ်ဘူးဆို
တစ်နေ့အလုပ် လုပ်ရမှ တစ်နေ့ထမင်းစားရသူက ဘယ်လောက် ခရီးသွားချင်ပါစေအုန်း ဘယ်လို သွားမတုန်း
” အခုလဲ နှစ်လတိတိ ကြိုပလန်ထားတဲ့ ခရီးစဉ်ကို လုပ်နေတယ် ”
ဒီ တစ်ခါ ခရီးစဉ် က ဘယ်သွားမှာလဲ ။
ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ နဲ့ ရတယ်ပြောတဲ့ခရီးစဉ်နဲ့.. အမေရိကားလာခဲ့လေ..။
ရွာထဲက ရွာသူားတွေ ၁၀ယောက်အနည်းဆုံးအပါခေါ်ခဲ့..။
Thint Aye Yeik says: တစ်နေ့ ရောက်ရမယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတစ်နေ့နည်းနည်းစုသွားရင်..ရောက်ပါလိမ့်မယ် စကားကို တော်တော်ကပ်ပြောတာပဲ
Foreign Resident says: ဗီယက်နမ်ကိုသွားပါမယ် ပြန်လာရင် အတွေ့ အကြုံလေးတွေပြန်ရှယ်ပေးပါဦးမယ်
ငငင် ဗီယက်နမ်သွားဖို့ 2လ အချိန်ယူရတယ်လား ။
နီးနီးနားနားပြေးသွားရတာပဲကို …. ။
kai says: ဟုတ်ကဲ့ပါ ခုကတည်းကပိုက်ပိုက်စစုပါတော့မယ် အမေရိကားလည်းရောက်ဖူးချင်ပါတယ်
ခုလည်း Phillippines ကိုသွားချင်နေတယ်